Ozempic vs. Trulicity: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, समाचार समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य कम्पनी समुदाय औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट औषधि बनाम मित्र कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Ozempic vs. Trulicity: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Ozempic vs. Trulicity: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
यदि तपाइँसँग टाइप २ मधुमेह छ भने, तपाइँको एन्डोक्रिनोलजिस्ट वा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाइँको रगतमा चिनीलाई नियन्त्रण गर्न एउटा ईजेन्टेसन औषधी प्रयोग गरेर उल्लेख गरेको हुन सक्छ। ओजेम्पिक (सेमग्लुटाइड) र ट्रुलसिटी (डुलाग्लुटाइड) दुई ब्रान्ड-नाम ईन्जेक्शन योग्य औषधिहरू टाइप २ मधुमेहको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। ओजेम्पिक नोवो नर्डिस्कले बनाएको हो, र ट्रलिसिटी एली लिली र कम्पनीले बनाएको हो। दुबै औषधि एफडीए द्वारा अनुमोदित छ। ती औषधीहरूको समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ जसलाई GLP-१ रिसेप्टर एगोनिस्टहरू (ग्लूकागन-जस्तो पेप्टाइड एगोनिस्टहरू) भनिन्छ।
ओजेम्पिक र ट्रुलिसिटी इन्जेक्शन योग्य मधुमेह औषधि हो - तर त्यस्तो छैन इन्सुलिन । तिनीहरू ईन्सुलिन स्राव उत्तेजित गरेर र ग्लुकोगन स्राव कम गरेर, रगत ग्लुकोजको स्तर कम गरेर कार्य गर्दछन्। यी औषधीहरूले पनि ग्यास्ट्रिक खाली हुनमा ढिलाइ गर्दछ, जसले भूक र पोस्टप्रेन्डियल (खाना पछि) रगतमा चिनीको स्तर नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरूले शरीरको वजन कम गर्न मद्दत गरेर वजन घटाउन सहयोग गर्दछ।
ओजेम्पिक र ट्रुलसिटीले हेमोग्लोबिन A1c रिडक्शन (HbA1c) लाई पनि मद्दत गर्दछ जुन समयको साथ ग्लूकोज नियन्त्रणको उपाय हो। जे होस् दुबै औषधीहरू GLP-1 एगोनिस्टहरू हुन्, तिनीहरूको केही भिन्नताहरू छन्, जुन हामी तल छलफल गर्नेछौं।
ओजेम्पिक र ट्रुलसिटी बीचका मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
ओजेम्पिक र ट्रुलसिटी एक औषधि वर्गमा छन् जसलाई GLP-1 एगोनिस्ट, वा ग्लुकागन-जस्तो पेप्टाइड एगोनिस्ट भनिन्छ। दुबै औषधिहरू ब्रान्ड नाममा मात्र उपलब्ध छन्। ओजेम्पिकमा सक्रिय संघटक सेमग्लाइटाइड हो, र ट्र्युलिसिटीमा सक्रिय संघटक डुलाग्लुटाइड हो। यद्यपि दुबै औषधी हाल जेनेरिक फर्ममा उपलब्ध छैन। दुबै औषधी पेन इंजेक्शन फारममा उपलब्ध छन्। प्रत्येक साप्ताहिक खुराकको साथ, औषधी पेट, जांघ, वा माथिल्लो बाहुमा subcutomot इंजेक्शन गरिन्छ।
Ozempic र Trulicity बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग ग्लुकागन-जस्तो पेप्टाइड १ (GLP-1) रिसेप्टर एगोनिस्ट ग्लुकागन-जस्तो पेप्टाइड १ (GLP-1) रिसेप्टर एगोनिस्ट
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति ब्राण्ड ब्राण्ड
जेनेरिक नाम के हो? Semaglutide Dulaglutide
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? पेन इंजेक्शन subcutaneous इंजेक्शन को लागी पेन इंजेक्शन subcutaneous इंजेक्शन को लागी
मानक खुराक के हो? सुरू खुराक: ०.२5 मिलीग्राम हप्तामा एक पटक।
Weeks हप्ता पछि, हप्तामा एक पटक 0.5 मिलीग्राममा खुराक बढाउनुहोस्।
बढि ग्लाइसेमिक नियन्त्रणको आवश्यकता छ भने weeks हप्ता पछि एक हप्ता एकचोटि १ मिलीग्रामसम्म बढ्न सक्छ।
अधिकतम सिफारिश गरिएको खुराक १ मिलीग्राम साप्ताहिक हो सुरू खुराक: ०.7575 मिलीग्राम साप्ताहिक एक पटक।
साप्ताहिक एक पटक १. 1.5 मिलीग्राममा बढ्न सक्दछ यदि थप ग्लाइसेमिक नियन्त्रण आवश्यक छ भने।
अधिकतम सिफारिश गरिएको खुराक १. mg मिलीग्राम साप्ताहिक एक पटक
Trulicity मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
ट्रुलिसिटी मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
सर्तहरू Ozempic र Trulicity द्वारा उपचार
दुबै ओजेम्पिक र ट्रुलसिटीका दुई संकेतहरू छन्। पहिलो स्केत भनेको वयस्कमा टाइप २ मधुमेह (डाईट र व्यायामको साथमा) ग्लाइसेमिक नियन्त्रण सुधार गर्नु हो। दोस्रो स्केत भनेको टाइप २ मधुमेह र हृदय रोग भएका बिरामीहरूमा प्रमुख मुटु घटनाहरू (स्ट्रोक, हार्ट अट्याक, हृदय मृत्यु) को जोखिम कम गर्नु हो।
सर्त ओजेम्पिक विश्वास
टाइप २ मधुमेह मेलिटस (डीएम) को साथ वयस्कहरूमा ग्लाइसेमिक नियन्त्रण सुधार गर्न आहार र व्यायामको साथ संयोजन हो हो
टाइप २ डीएम र कार्डियोवास्कुलर रोगको साथ वयस्कहरूमा प्रमुख प्रतिकूल हृदय घटनाहरूको जोखिम कम गर्न हो हो
के ओजेम्पिक वा ट्रिलिसिटी अधिक प्रभावकारी छ?
चरणbखमा प्रयोगसाला परिक्षण भनिन्छ, SUSTAIN 7, ट्रुलिसिटी बिरुद्द Ozempic तुलना, Ozempic रगतमा चिनी नियन्त्रणमा सुधार गर्न को रूप मा थोरै राम्रो पाइएको थियो र एक समान सुरक्षा प्रोफाइलको साथ वजन वजन घटाउन। यद्यपि यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि ओजेम्पिकका निर्माता नोवो नॉर्डिसकद्वारा यो अध्ययन गरिएको थियो। ओजिमपिकलाई ट्रिलिसिटीसँग तुलना गर्ने क्रममा कुनै अन्य हेड-टु-हेड अध्ययन गरिएको छैन।
कसरी uti महिला बाट छुटकारा पाउन
तपाईंको लागि सबैभन्दा प्रभावी औषधि तपाईंको एंडोक्रिनोलजिस्ट वा प्राथमिक स्वास्थ्यसेवा प्रदायकद्वारा राम्रो निर्धारण गरिन्छ, जसले तपाईंको मेडिकल अवस्था (हरू) र चिकित्सा ईतिहास लिन सक्दछ, साथै तपाईंले लिनुहुने अन्य औषधीहरूको साथ।
कभरेज र ओजेम्पिक बनाम ट्रिलिसिटीको लागत तुलना
दुबै ओजेम्पिक र ट्रुलसिटी धेरै जसो बीमा र मेडिकेयर पार्ट डी योजनाहरु द्वारा कभर गरिएको छ। तपाईंको योजनाको लागि निर्दिष्ट विवरणहरू / लागतहरूको लागि तपाईंको बीमा प्रदायकसँग जाँच गर्नुहोस्।
एक Ozempic प्रिस्क्रिप्शन लगभग 70 970 छ। तपाईं एक सिंगलकेयर ओजेम्पिक डिस्काउंट कूपनको साथ 11 711 मा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
Trulicity को लागी एक नुस्खा लगभग $ 2,000 चलान सक्छ। तपाईं एकलकेयरको साथ बचत गर्न सक्नुहुन्छ र participating 1,432 भुक्तानी गर्ने फार्मेसीहरूमा।
सामान्यतया बीमा द्वारा कभर? हो (सामान्यतया) हो (सामान्यतया)
सामान्यतया चिकित्सा भाग डी द्वारा कभर? हो (सामान्यतया) हो (सामान्यतया)
मानक खुराक १ प्रिफिल पेन (०.२5 मिग्रि, ०. mg मिलीग्राम, वा १ मिग्रि प्रति इन्जेक्शन) Box को एक बक्स, एकल खुराक कलम (०.7575 मिलीग्राम वा ०. m मिलीलिटर इंजेक्शन १. 1.5 मिलीग्राम)
विशिष्ट मेडिकेयर पार्ट डी कोपे $ 25- $ 888 $ 25- $ 873
एकलकेयर लागत 11 11११4१,432२
ओजेम्पिक बनाम ट्रुलसिटीको साझा साइड इफेक्टहरू
ओजेम्पिकको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू मतली, बान्ता, पखाला, पेट दुखाइ, र कब्जाहरू हुन्। ट्रुलिसिटीको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू मतली, बान्ता, पखाला, पेट दुखाइ, कब्ज, भोक कम, थकान, र अपच हो। हाइपोग्लाइसीमिया (कम रगतमा चिनी) या त औषधीको साथ देखा पर्न सक्छ। यो साइड इफेक्ट को पूर्ण सूची छैन। अन्य प्रतिकूल प्रभावहरू हुन सक्छन्। साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
मतली हो १.8..8-२०.%% * हो १२..4-२१.१% *
बान्ता हो .0.०-9.२% हो .0.०-१२..7%
पखाला हो .5..5-8.%% हो 9.9-१२.%%
पेट दुख्ने हो 7.7-7.%% हो .5..5-.4।%%
कब्ज हो 1.१--5.०% हो 7.7--3.%%
हाइपोग्लाइसीमिया (कम रक्त शर्करा) हो फरक हुन्छ हो फरक हुन्छ
भोक कम भयो हो % रिपोर्ट गरिएको छैन हो 9.9-8.%%
थकान हो > ०..4% हो 2.२--5..6%
Dyspepsia (अपच) हो २.7--3.%% हो 1.१--5.%%
* खुराक मा निर्भर
स्रोत: डेलीमेड ( ओजेम्पिक ), डेलीमेड ( विश्वास )।
Ozempic vs Trulicity का ड्रग अन्तरक्रिया
ओजम्पिक वा ट्रुलिसिटीको साथ इन्सुलिन वा इन्सुलिन सेक्रेटोगोग्स (केही मौखिक मधुमेह औषधीहरू) हाइपोग्लाइसीमियाको जोखिम बढाउन सक्छ। यदि तपाईं यस औषधिहरूको संयोजन लिनुहुन्छ भने, तपाईंको प्रेसिड्राइबरले तपाईंको इंसुलिन वा मौखिक औषधिको खुराक समायोजित गर्दछ। साथै, किनकि ओजेम्पिक वा ट्रुलसिटीले ग्यास्ट्रिक खाली ढिलाइको कारण गर्दछ, मौखिक औषधिहरूको अवशोषण सम्भावित रूपमा प्रभाव पार्न सक्दछ यदि एकै समयमा लिईयो भने। अध्ययनमा, यी कुराकानीहरू क्लिनिक रूपमा प्रासंगिक डिग्रीमा देखा पर्दैन; यद्यपि यो राम्रो सल्लाह हो कि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिन तपाईको औषधीको समयको बारेमा छ।
एक साँघुरो चिकित्सीय अनुक्रमणिकाको साथ औषधि विशेष रूपमा अनुगमन गरिनु पर्छ। यसमा ड्रगहरू सामेल छन् जहाँ उपचारात्मक प्रभाव र विषाक्तता जस्तै कौमाडिन (वारफेरिन), ल्यानोक्सिन (डिगोक्सिन), र जब्ती औषधिहरू बीच एक सानो विन्डो रहेको छ।
गर्भावस्थामा मुटुको गति बढ्छ?
यो औषधी अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची होइन। औषधि अन्तर्क्रियाको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
औषधि औषधि वर्ग ओजेम्पिक विश्वास
(ग्लिमेपाराइड, ग्लिपाजाइड, ग्लाइब्युराइड) इन्सुलिन सेक्रेटोगोग्स हो हो
ट्रेसिबा इन्सुलिन हो हो
मौखिक औषधिहरू मौखिक औषधिहरू हो (सम्भवतः) हो (सम्भवतः)
Ozempic र Trulicity को चेतावनी
किनभने दुबै औषधी एकै औषधि वर्गमा छन्, चेतावनीहरू र सावधानीहरू प्रायः समान छन्। तपाईंले ओजेम्पिक वा ट्रुलसिटीको लागि कुनै प्रिस्क्रिप्शन भरिँदा कुनै पनि समयमा औषधि गाइड प्राप्त गर्नुहुनेछ, जुन साइड इफेक्ट र चेतावनीहरू माथि जान्छ।
ओजेम्पिक र ट्रुलसिटीका लागि त्यहाँ एक बक्से चेतावनी छ, जुन एफडीएलाई आवश्यक एक गम्भीर चेतावनी हो। कृन्तकमा, ओजेम्पिक वा ट्रुलसिटीले थाइरोइड सी-सेल ट्यूमर निम्त्याउँछ, साथै एमटीसी (मेड्युलरी थाइरोइड कार्सिनोमा)। यो मानवमा भएको हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा छैन। साथै, MTC को ईतिहास (वा पारिवारिक इतिहास) वा बहु endocrine नियोप्लासिया सिन्ड्रोम प्रकार २ (MEN 2) को साथ बिरामीहरूले ओजेम्पिक वा ट्रुलिसिटी लिनु हुँदैन।
तीव्र अग्नाशयशोथ हुन सक्छ। पेन्क्रियाटाइटिसका लक्षण र लक्षणहरूको लागि बिरामीहरूलाई होसियारीसाथ अवलोकन गर्नुपर्दछ, लगातार गम्भीर पेट दुख्ने सहित, जो पछाडि सर्छ, र बान्तासँगै हुन सक्छ वा हुन पनि सक्छ। यदि पेनक्रियाटाइटिस संदिग्ध छ भने, ओजेम्पिक वा ट्रुलिसिटी उपचार बन्द गरिनु पर्छ र उचित व्यवस्थापनको थालनी गरिनु पर्छ। यदि पनक्रियाटाइटिसको पुष्टि भयो भने, औषधि पुनः सुरु गर्नु हुँदैन।
मधुमेह रेटिनोपैथी जटिलताहरू हुन सक्छ - मधुमेह रेटिनोपैथीको इतिहास भएका बिरामीहरूमा जोखिम बढी हुन्छ। रगतमा चिनी नियन्त्रणको द्रुत सुधार मधुमेह रेटिनोपेथीको अस्थायी बिग्रनेसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। बिरामीहरूलाई अनुगमन गरिनु पर्छ।
ओजेम्पिक वा ट्रुलसिटी कलम बिरामीहरू बीच कहिले पनि साझेदारी गर्नु हुँदैन, यदि सुई परिवर्तन गरिएको छ भने, रगतले सार्ने रोगजनकहरूको प्रसारणको लागि बढेको जोखिमको कारण। ट्रिलसिटी कलम एकल-प्रयोग कलम हुन् - प्रत्येक ट्रुलसिटी कलम केवल एक पटक प्रयोग गरिन्छ।
कम रगतमा चिनी हुन सक्दछ जब ओजेम्पिक वा ट्रुलिसिटी ईन्सुलिन वा इन्सुलिन सेक्रेटोगोग औषधीको साथ लिईन्छ। इन्सुलिन वा इन्सुलिन सेक्रेटगोगको डोज समायोजन आवश्यक हुन सक्छ।
गम्भीर किडनीमा चोट लाग्ने र क्रिडिक किडनी असफलताको बिग्रँदो अवस्था हुन सक्छ, जसलाई डायलिसिस आवश्यक पर्दछ। लक्षणहरूमा मतली, बान्ता, पखाला, र / वा डिहाईड्रेसन समावेश हुन सक्छ। मृगौला समारोह अनुगमन गरिनु पर्छ।
गम्भीर अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाहरू (एनाफिलैक्सिस वा एंजियोएडेमा) रिपोर्ट गरिएको छ। यदि यो हुन्छ भने, ओजेम्पिक वा ट्रुलसिटी बन्द गरिनु पर्छ। अघिल्लो अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रिया भएका बिरामीहरूले ओजेम्पिक वा ट्रोलिसिटी प्रयोग गर्नुहुन्न।
भ्रुणको सम्भावित जोखिमको कारण, ओजेम्पिक वा ट्रुलसिटी सामान्यतया गर्भावस्थामा प्रयोग गरिनु हुँदैन, जबसम्म लाभहरू जोखिम भन्दा बढी हुन्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले सम्भवतः अर्को वैकल्पिक औषधि प्रयोग गर्न पाउनेछ।
थप रूपमा, ट्रुलसिटी निर्माता जानकारी भन्छ कि औषधी कहिलेकाँही गम्भीर, ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल (GI) प्रतिक्रियाहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। किनभने ग्रोस्ट्रोपरेसिसलगायत गम्भिर जीआई रोगका बिरामीहरूमा ट्रुलिसिटीको अध्ययन गरिएको छैन, यी बिरामीहरूलाई प्रयोग गर्न सिफारिस गरिदैन।
ओजेम्पिक बनाम ट्रिलिसिटीको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
ओजेम्पिक भनेको के हो?
ओजेम्पिक एक पटक साप्ताहिक ईजेन्टेसन औषधी हो जुन टाइप २ मधुमेहको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। यो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट भनेर चिनिन्छ।
ट्रुलिसिटी भनेको के हो?
ट्रुलिसिटी एक पटक साप्ताहिक ईन्जेक्सन हो टाइप २ मधुमेह को उपचारको लागि। यो एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हो।
के ओजेम्पिक र ट्रुलसिटी एकै छ?
ओजेम्पिक र ट्रुलसिटी दुबै औषधि वर्गमा छन् जसलाई GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट भनिन्छ। तिनीहरू धेरै समान छन्, तर एकदम समान छैन। माथिको जानकारी प्रत्येक औषधिको बारेमा बढि विस्तारमा जान्छ। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट वर्गमा अन्य ड्रग्समा भिक्टोजा (लिराग्लुटाइड), ब्याएटा (एक्सेनेटाइड), बाइड्युरोन (एक्सटेंडेड-रिलीज एक्स्नेटाइड), र एड्लिक्सिन (lixisenatide) समावेश छ। त्यहाँ मौखिक सेमाग्लाइटाइड ट्याब्लेट पनि उपलब्ध छ, ओजेम्पिकमा उही घटकसँग। मौखिक ट्याब्लेटलाई राइबेलस भनिन्छ।
के ओजेम्पिक वा ट्रिलिसिटी राम्रो छ?
दुवै औषधिहरू ग्लाइसेमिक नियन्त्रण प्राप्त गर्न र तौल घटाउन मद्दतको रूपमा प्रभावकारितामा समान देखिन्छन्। एउटा अध्ययनले (माथि हेर्नुहोस्) दुई औषधिहरू तुलना गर्यो र ओजेम्पिक थोरै राम्रो भएको पाए। तर यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि अध्ययन ओजेम्पिकका निर्माताले गरेका थिए। तपाइँको हेल्थकेयर प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस् कि ओजिमपिक वा ट्रुलिसिटी तपाईका लागि उपयुक्त औषधि हुन सक्छ।
के म गर्भवती हुँदा ओजेम्पिक वा ट्रुलसिटी प्रयोग गर्न सक्छु?
गर्भावस्थामा ओझेम्पिक र ट्रुलसिटीमा सीमित डाटा छ। तिनीहरूले भ्रुण हानि निम्त्याउन सक्छ। निर्देशनको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस्। यदि तपाईं पहिले नै ओजेम्पिक वा ट्रूलसिटी लिइरहनुभएको छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भनेर फेला पार्नुभयो भने, निर्देशनका लागि तुरून्त तपाईंको OB-GYN लाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
के यो ३ ibuprofen सुरक्षित छ?
म रक्सीको साथ ओजेम्पिक वा ट्रुलसिटी प्रयोग गर्न सक्छु?
ओजेम्पिक वा ट्रुलिसिटी प्रयोग गर्दा रक्सीलाई जोगाउनु उत्तम हो। रक्सीले कम रगत चिनी निम्त्याउन सक्छ, र ओजेम्पिक वा ट्रुलसिटी कम रगत चिनीको कारण पनि हुन सक्छ। संयोजन गम्भीर वा लामो समयसम्म कम रगतमा चिनी पैदा गर्न सक्छ।
के ओजेम्पिक मेटोरफर्मिन जस्तै छ?
न। ओजेम्पिक इंजेक्शन वा मेटफर्मिन मौखिक औषधि ईन्सुलिन र / वा अन्य मौखिक औषधिहरूको साथसाथै आहार र व्यायामको साथ टाइप २ मधुमेहको उपचारको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। (ओजेम्पिक टाइप १ मधुमेहको उपचार वा डायबेटिक केटोआसिडोसिसको उपचारका लागि संकेत गरिएको छैन)।
काम गर्न सुरु गर्न ओजेम्पिकलाई कति समय लाग्छ?
एकचोटि तपाईंले ओजेम्पिक ईन्जेक्स गर्नुभयो, अधिकतम स्तर एक देखि तीन दिनमा पुग्छ। यद्यपि यसको प्रभावहरू हेर्न यसले लामो समय लिन सक्दछ। सबै भन्दा साधारण खुराक हप्तामा एक पटक 0.25 मिलीग्राम मा शुरू र चार हप्ता पछि, तपाईं हप्तामा एक पटक 0.5 मिलीग्राम गर्न खुराक वृद्धि हुनेछ। यदि चार थप हप्ता पछि, तपाईंलाई थप नियन्त्रण चाहिन्छ भने, तपाईं हप्तामा एकचोटि १ मिग्रिमा बढ्नुहुनेछ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंलाई उचित खुराकमा मार्गदर्शन गर्दछ।
के ओजेम्पिकले चिन्ता निम्त्याउँछ?
ओजेम्पिक निर्माताको जानकारी चिन्तालाई साइड इफेक्टको रूपमा सूचीबद्ध गर्दैन। यद्यपि ओजेम्पिकले हाइपोग्लाइसीमिया (कम रगत चिनी) निम्त्याउन सक्छ, र चिन्ता कम रगतमा चिनीको धेरै लक्षणहरू मध्ये एक हुन सक्छ। यदि तपाईं ओजेम्पिकमा हुनुहुन्छ र चिन्ता छ कि तपाईं पहिले अनुभव गर्नुभएको छैन भने, आफ्नो हेल्थकेयर प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
डिलाउडिड बनाम पर्कोसेट: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
पुरुषहरु को लागी एक खमीर संक्रमण के हो
कसरी घर मा छिटो कब्ज छुटकारा पाउन
मधुमेह परीक्षण स्ट्रिप्स को लागी मेडिकेयर तिर्दछ
तरिका स्वाभाविक रूप बाट खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउन
के तपाइँ गर्भावस्था मा पेप्टो बिस्मोल पाउन सक्नुहुन्छ?
म कब्जियत को प्राकृतिक बाट कसरी छुटकारा पाउन सक्छु